Iwu Nchedo Data na nhazi nkeonwe - Ndị na -akwado E -mbupụ
1.1. Ebumnuche nke Iwu ahụ
N'ime oke Iwu Nke 6698 na Nchedo Data Nkeonwe ("Iwu")
Dị ka ndị na -akwalite Teknoloji Anonim Şirketi (“Ndị na -akwalite” na “Ụlọ ọrụ”), nhazi na ichedo data nkeonwe dịka iwu siri dị bụ ihe kacha anyị mkpa. Anyị na -agbaso otu mkpa na atụmatụ na azụmahịa anyị niile. N'ọnọdụ a, dabere na Nkeji edemede 10 nke Iwu ahụ, iji nye gị nghọta; Iji gwa gị usoro nhazi na teknụzụ niile anyị ga -eme n'ime oke nhazi na nchekwa nke data nkeonwe, anyị na -edobe usoro nhazi data na nchekwa nkeonwe ("amụma") na ozi gị.
Iwu a na -ekpebi ọnọdụ nhazi nke data nkeonwe wee setịpụ ụkpụrụ ndị Propars nabatara na nhazi data nkeonwe. N'okwu a, Iwu; Ọ na -ekpuchi ọrụ nhazi data nkeonwe ọ bụla ndị Propars rụrụ n'ime oke nke Iwu, ahaziri data nkeonwe yana ndị nwe data a.
Nkwenye Mepere emepe Kwenye n'otu isiokwu, dabere na ozi ma kwupụta ya na nnwere onwe ime nhọrọ.
Amaghị aha Ime data jikọtara na mbụ na onye na -enweghị ike ijikọ ya na onye okike amapụtara ma ọ bụ onye amata n'ọnọdụ ọ bụla, ọbụlagodi site na ijikọ ha na data ndị ọzọ.
Ohere onye ọrụ Ezigbo ndị na -anaghị arụ ọrụ n'ime ndị na -akwalite mana ha nọ n'ọkwa ndị na -achọ ọrụ.
Data nkeonwe Ozi ọ bụla metụtara onye okike amataghị ma ọ bụ nke amata.
Onye nwe data Onye okike nke ahaziri data nkeonwe ya.
Nhazi nke data nkeonwe Inweta, idekọ, ịchekwa, ichekwa, ichekwa, gbanwee, ịhazigharị, ikpughe, nyefee, weghara, na-enye ohere, ikewa ma ọ bụ iji data nkeonwe n'ozuzu ma ọ bụ akụkụ site na akpaka ma ọ bụ na-akpaghị aka ma ọ bụrụhaala na ọ bụ akụkụ nke sistemụ ndekọ data ọ bụla. Ọrụ ọ bụla emere na data, dị ka igbochi.
Iwu Iwu maka Nchedo Data Nkeonwe Nke 7, nke edepụtara na Official Gazette akara ụbọchị 2016 Eprel 29677 wee gụọ 6698.
Data nkeonwe ruru eru Data gbasara agbụrụ, agbụrụ, echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nkwenye nkà ihe ọmụma, okpukpere chi, ịrọ òtù ma ọ bụ nkwenkwe ndị ọzọ, uwe, mkpakọrịta, ntọala ma ọ bụ ndị otu, ahụike, ndụ mmekọahụ, ikpe mpụ na nchekwa, yana data biometric na mkpụrụ ndụ ihe nketa.
iwu Propars Teknoloji Anonim Şirketi Iwu Nhazi na Nchedo Nkeonwe
Ụlọ ọrụ/Propars Propars Technology Joint Stock Company
Onye nhazi data Ọ bụ onye sitere n'okike na iwu na -ahazi data nkeonwe n'aha onye njikwa data dabere na ikike onye njikwa data nyere.
Onye njikwa data Ọ bụ onye na -ekpebi ebumnuche na ụzọ nhazi data nkeonwe ma jikwaa ebe edobere data ahụ n'usoro.
Sistemụ ndekọ data Ọ bụ usoro ndekọ ihe nke a na -ahazi ma hazie data nkeonwe dịka ụkpụrụ ụfọdụ siri dị.
Ndị ọrụ ibe Ndị ha na Propars hibere njikọta n'etiti oke nkwekọrịta n'ime usoro ọrụ azụmahịa ya.
1.4 Ime Iwu ahụ
Iwu a, ndị Propars kwadebere, malitere na May 25 wee gosi ya ọha. Ọ bụrụ na emegide iwu dị n'ike, ọkachasị Iwu, yana ụkpụrụ agụnyere na Iwu a, ndokwa nke iwu ga -adị.
Ndị na -akwalite ikike nwere ikike ime mgbanwe na Iwu ahụ n'usoro iwu kwadoro. Ị nwere ike ịnweta ụdị Iwu ugbu a na weebụsaịtị Propars (www.propars.net).
2. Ozi gbasara ihe nhazi data nkeonwe nke ndị na -akwadebe ha rụrụ
Ihe gbasara data n'ime oke amụma bụ mmadụ niile, ma e wezụga ndị ọrụ Propars, ndị Propars hazie data nke ha. N'ozuzu, enwere ike depụta ndị nwe data dị ka ndị a:
ahịa Ọ na -ezo aka na ndị mmadụ n'ezie na -erite uru na ngwaahịa na ọrụ ndị Propars na -enye.
Ndị ahịa nwere ike Ọ na -ezo aka na ezigbo ndị nwere mmasị na ngwaahịa na ọrụ ndị Propars na -enye ma nwee ikike ịghọ ndị ahịa.
Ndị anamachọ ọrụ Ọ na -ezo aka na ezigbo ndị mmadụ na -etinye akwụkwọ maka Propars site na izipu CV ma ọ bụ site na ụzọ ndị ọzọ.
Ndị otu nke atọ Ọ na -ezo aka na ndị mmadụ dị adị, ewezuga edemede nke isiokwu data akpọrọ n'elu na ndị ọrụ Propars.
Edepụtara edemede nke isiokwu data akọwapụtara na tebụl dị n'elu maka ebumnuche ịkekọrịta ozi n'ozuzu. Eziokwu ahụ bụ na onye nwe data adabaghị n'okpuru nke ọ bụla n'ime edemede ndị a anaghị ewepụ ntozu onye nwe data ahụ dị ka Iwu kwuru.
2.2 Ebumnuche nke nhazi data nkeonwe
2.2.1 Ịrụ ọrụ dị mkpa site na ngalaba dị mkpa yana ime usoro azụmahịa iji mee ka ndị dị mkpa rite uru na ngwaahịa na ọrụ ndị Propars nyere:
Atụmatụ na mmezu nke usoro ahịa nke ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ,
Atụmatụ na/ma ọ bụ ogbugbu nke ọrụ nkwado ahịa mgbe emechara,
Atụmatụ na mmezu nke usoro njikwa mmekọrịta ndị ahịa,
Nsonye nke usoro nkwekọrịta yana/ma ọ bụ arịrịọ iwu,
Nsonye nke arịrịọ ndị ahịa na/ma ọ bụ mkpesa.
2.2.2 Nhazi na ogbugbu nke ndị na -akwalite atumatu na usoro ọrụ mmadụ:
Nhazi na mmezu nke ọrụ mmepe nka,
Imezu ọrụ ndị sitere na nkwekọrịta ọrụ yana/ma ọ bụ iwu maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ,
Na -eme atụmatụ na imezu uru na uru dị nta maka ndị ọrụ,
Na-eme atụmatụ ma na-eme ihe omume ime ụlọ,
Nhazi na ogbugbu nke usoro ọpụpụ ndị ọrụ,
Atụmatụ nhazi usoro ọrụ mmadụ,
Ijikwa usoro ị nweta ndị ọrụ,
Nhazi na mmezu nhọpụta nkwalite na nchụpụ maka ụlọ ọrụ,
Atụmatụ na mmezu nke usoro nyocha ọrụ ndị ọrụ,
Nlekota na/ma ọ bụ ịchịkwa ọrụ azụmahịa nke ndị ọrụ,
Atụmatụ na/ma ọ bụ igbu ọrụ ọzụzụ ụlọ ọrụ,
Atụmatụ na mmezu nke afọ ojuju ndị ọrụ na/ma ọ bụ usoro iguzosi ike n'ihe,
Na -eme atụmatụ na ime usoro nke ịnata na inwale aro maka imeziwanye ọrụ na / ma ọ bụ usoro mmepụta nke ndị ọrụ,
Nhazi na/ma ọ bụ igbu onye ọrụ na/ma ọ bụ mbanye ụmụ akwụkwọ, itinye ya na usoro ọrụ ya.
2.2.3 Iji rụọ ọrụ azụmaahịa nke ndị na -akwado ya na -arụ, a na -arụ ọrụ dị mkpa site na ngalaba azụmaahịa dị mkpa yana a na -eme usoro azụmahịa metụtara:
njikwa ihe omume,
Atụmatụ na mmezu nke ọrụ azụmahịa,
Atụmatụ na mmezu nke ọrụ nkwukọrịta ụlọ ọrụ,
Nhazi na mmezu nke usoro nhazi usoro ọkọnọ,
Atụmatụ na mmezu nke mmepụta na/ma ọ bụ usoro ọrụ,
Nhazi, nyocha na mmezu nke usoro nchekwa ozi,
Okike na njikwa akụrụngwa teknụzụ ozi,
Ịhazi na imezu ikike ịnweta ozi nke ndị mmekọ azụmahịa,
Ntinye ego na/ma ọ bụ ọrụ ndekọ ego,
Atụmatụ na mmezu nke ọrụ nkwado ụlọ ọrụ,
Atụmatụ na mmezu nke ọrụ nchịkwa ụlọ ọrụ,
Atụmatụ na/ma ọ bụ igbu ihe omume na -aga n'ihu n'ihu azụmahịa,
Nhazi na ogbugbu nke ọrụ lọjistik.
2.2.4 Ịhazi na ime ihe ndị dị mkpa iji kwado ma kwalite ngwaahịa na ọrụ nke ndị na -akwadebe na -enye ndị dị mkpa site na ịhazi ha dịka ụtọ ha si dị, omume ojiji na mkpa ha:
Nchọpụta na/ma ọ bụ nyocha nke ndị mmadụ ga -edo onwe ha n'okpuru ọrụ azụmaahịa kwekọrọ n'ụkpụrụ omume ndị ahịa,
Ịmepụta na/ma ọ bụ ịme ahịa ahaziri iche na/ma ọ bụ ihe nkwado,
Ịmepụta na/ma ọ bụ ime mgbasa ozi na/ma ọ bụ nkwalite na/ma ọ bụ ọrụ ahịa na dijitalụ na/ma ọ bụ mgbasa ozi ndị ọzọ,
Imebe na/ma ọ bụ na -eme ihe omume ka etolite na nnweta ndị ahịa yana/ma ọ bụ imepụta ihe bara uru n'ime ndị ahịa nọ na dijitalụ na/ma ọ bụ ọwa ndị ọzọ,
Na -eme atụmatụ na/ma ọ bụ na -eme nyocha nyocha data maka ebumnuche ahịa,
Atụmatụ na mmezu nke usoro azụmaahịa nke ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ,
Na -eme atụmatụ na/ma ọ bụ na -eme usoro ịtọlite ​​na/ma ọ bụ na -abawanye iguzosi ike n'ihe na ngwaahịa na/ma ọ bụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ nyere.
2.2.5 Atụmatụ na igbu atụmatụ azụmaahịa na/ma ọ bụ azụmaahịa nke ndị na -akwalite:
Ijikwa mmekọrịta na ndị mmekọ azụmahịa.
2.2.6 Gbaa mbọ hụ na nchekwa ọrụ, iwu na azụmaahịa ọrụ nke ndị na -akwado ya na ndị ya na ha nwere mmekọrịta azụmaahịa na ndị na -akwado ya:
Ịgbaso usoro iwu
Na -eme atụmatụ ma na -arụ ọrụ arụmọrụ dị mkpa iji hụ na emebere ọrụ ụlọ ọrụ dịka usoro ụlọ ọrụ na/ma ọ bụ iwu dị mkpa si dị,
Inye ozi nye ụlọ ọrụ enyere ikike dabere na iwu,
Ịmepụta na nyochaa ndekọ ndị ọbịa,
Nhazi na mmezu nke usoro nlekọta ihe mberede,
Mmezu nke azụmahịa ụlọ ọrụ yana mmekorita iwu,
Nhazi na mmezu nke ọrụ nyocha ụlọ ọrụ,
Atụmatụ na/ma ọ bụ igbu usoro ahụike na/ma ọ bụ nchekwa,
Mmezu nke njikwa ihe egwu nke usoro kredit,
Gbaa mbọ hụ na nchekwa nke ogige ụlọ ọrụ na/ma ọ bụ akụrụngwa,
Ịhụ na nchekwa nke ọrụ ụlọ ọrụ,
Atụmatụ na/ma ọ bụ igbu usoro ihe egwu ụlọ ọrụ,
Ịhụ na nchekwa nke ndozi ụlọ ọrụ na/ma ọ bụ akụrụngwa.
2.3 Otu nke data nkeonwe
A na -ahazi data nkeonwe dị ka ndị na -akwado ya si dị dabere na ọnọdụ nhazi data nkeonwe na Iwu yana iwu dị mkpa:
nzere Ozi dị n'akwụkwọ dịka akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala, kaadị njirimara, ebe obibi, paspọtụ, ID ọka iwu, akwụkwọ alụmdi na nwunye.
Ozi nkwukọrịta Ozi ejiri kpọtụrụ onye ahụ (dịka adreesị ozi-e, akara ekwentị, akara ekwentị mkpanaaka, adres).
Ozi ebe Ozi na -enyere aka ịchọpụta ọnọdụ nke isiokwu data (dịka ozi ebe enwetara mgbe ị na -anya ụgbọala).
Ozi ndị ahịa Ozi gbasara ndị ahịa na -erite uru na ngwaahịa na ọrụ anyị (dịka nọmba ndị ahịa, ozi ọrụ, wdg).
Ozi azụmahịa ndị ahịa Ozi gbasara azụmahịa ọ bụla ndị ahịa na -eji ngwaahịa na ọrụ anyị.
Ozi nchekwa ọnọdụ anụ ahụ Data nkeonwe metụtara ndekọ na akwụkwọ dị ka ndekọ igwefoto, ihe ndekọ mkpịsị aka e mere n'oge mbata oghere anụ ahụ yana n'oge ọnụnọ na oghere anụ ahụ.
Ozi nche azụmahịa A haziri data nkeonwe iji hụ na teknụzụ, nhazi, iwu na nchekwa azụmahịa ka ị na -arụ ọrụ azụmahịa nke ndị na -akwalite.
ozi ego A haziri data nkeonwe maka ozi, akwụkwọ na ndekọ na -egosi ụdị nsonaazụ ego niile emepụtara dabere na ụdị mmekọrịta iwu nke Propars guzobere na onye nwe data nkeonwe.
Ozi onye anamachọihe A haziri data nkeonwe gbasara ndị tinyerela akwụkwọ ka ha bụrụ onye ọrụ nke Propars ma ọ bụ ndị enyochala dị ka onye na -achọ ọrụ dabere na mkpa akụ na ụba mmadụ dị ka omume azụmaahịa na iwu ịkwụwa aka ọtọ si dị, ma ọ bụ ndị nwere mmekọrịta ọrụ na ndị na -akwado ya.
Iwu iwu na ozi nnabata A haziri data nkeonwe n'ime oke nke mkpebi nnata ego na ikike nke ndị na-akwado ya, nsuso na ịrụ ọrụ nke ụgwọ, ọrụ iwu yana imebe iwu ụlọ ọrụ.
Ozi nyocha na nyocha A haziri data nkeonwe n'ime oke nke nkwado Propars na ọrụ iwu yana amụma ụlọ ọrụ.
Data ogo pụrụ iche Data gbasara agbụrụ, agbụrụ, echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nkwenye nkà ihe ọmụma, okpukpere chi, ịrọ òtù ma ọ bụ nkwenkwe ndị ọzọ, uwe na uwe, isonye na mkpakọrịta, ntọala ma ọ bụ ịlụ, ahụike, ndụ mmekọahụ, nkwenye mpụ na usoro nchekwa, yana biometric na data mkpụrụ ndụ ihe nketa nke ndị mmadụ .
Ozi ahịa A haziri data nkeonwe maka ịre ahịa ngwaahịa na ọrụ ndị Propars na -enye dabere na omume ojiji, ụtọ na mkpa nke onye nwe data nkeonwe, yana mkpesa na nyocha ndị emepụtara n'ihi nsonaazụ nhazi ndị a.
Arịrịọ/ozi njikwa mkpesa Data nkeonwe gbasara nnata na nyocha nke arịrịọ ọ bụla ma ọ bụ mkpesa ọ bụla enyere ndị na -akwado ya.
Ihe ọmụma njikwa aha ọma Ozi anakọtara maka ebumnuche nke ichebe aha azụmahịa nke Propars, akụkọ nyocha na ihe ndị e mere.
Ozi njikwa ihe mberede A haziri data nkeonwe iji were usoro iwu, teknụzụ na nhazi dị mkpa megide ihe na -emepe emepe iji kpuchido ikike azụmaahịa na ọdịmma nke ndị na -akwado ya na ikike na ọdịmma nke ndị ahịa ya.
3. Ụkpụrụ na ọnọdụ gbasara nhazi data nkeonwe
Ndị na -akwado ya, gbasara nhazi data nkeonwe dabere na Nkeji edemede 4 nke Iwu ahụ; na-etinye aka na nhazi data nkeonwe n'ụzọ amachiri ma tụọ, dabere na iwu na ịkwụwa aka ọtọ, n'ụzọ ziri ezi yana, mgbe ọ dị mkpa, maka ebumnuche ọhụrụ, nke akọwapụtara nke ọma na nke ziri ezi. Ndị na -akwado ihe na -ejigide data nkeonwe ruo oge iwu chọrọ ma ọ bụ maka nhazi data nkeonwe.
3.1 Ụkpụrụ gbasara nhazi nkeonwe
Ndị na -akwado bụ ime ka ndị nwe data mara ihe dabere na Nkeji edemede 10 nke Iwu KVK yana n'ọnọdụ achọrọ nkwenye, ndị na -eme ihe na -ahazi data nkeonwe dabere na ụkpụrụ edepụtara n'okpuru, site na ịrịọ nkwenye ha.
3.1.1 Nhazi data n'ịkwado iwu na iwu iguzosi ike n'ezi ihe
Ndị na -akwado ihe na -eme ihe kwekọrọ n'ụkpụrụ nke usoro iwu wetara yana iwu izugbe ntụkwasị obi na ịkwụwa aka ọtọ na nhazi data nkeonwe. N'ikwekọ n'ụkpụrụ nke nrube isi n'iwu nke iguzosi ike n'ezi ihe, Propars na -atụle ọdịmma na atụmanya ezi uche dị na isiokwu data mgbe ọ na -achọ imezu ebumnuche ya na nhazi data.
3.1.2 Ịhụ na data nkeonwe gị ziri ezi ma bụrụ nke ọhụụ mgbe ọ dị mkpa
Idobe data nkeonwe ziri ezi na nke ọhụrụ bụ ihe dị mkpa maka ndị na-akwadebe iji chedo ikike na nnwere onwe nke onye ọ metụtara. Ndị na-akwadebe nwere ọrụ nlekọta na-arụ ọrụ nke ọma iji hụ na data nkeonwe bụ eziokwu yana ọfụma mgbe ọ dị mkpa. Maka nke a, ọwa nkwukọrịta niile na-emeghe site na Propars iji mee ka ozi nke onye nwe data bụrụ eziokwu na ọfụma.
3.1.3 Nhazi data maka ebumnuche akọwapụtara nke ọma na nke ziri ezi
Ndị na -akwadebe nke ọma na nke ọma na -ekpebi ebumnuche nhazi data nkeonwe, nke ziri ezi na iwu kwadoro. Ọ na -ahazi data nkeonwe yana ọrụ azụmahịa ọ na -arụ yana dịkwa mkpa maka ndị a.
3.1.4 Mkpa, mmachi na nha nke data maka ebumnuche ha ji hazie ya
Ndị na -akwado ya; na -ahazi data nkeonwe n'ime oke ebumnuche metụtara mpaghara ọrụ ya yana dị mkpa maka omume azụmahịa ya. Maka nke a, ọ na -ahazi data nkeonwe ya n'ụzọ dabara adaba maka mmezu ebumnuche ezubere ma na -ezere nhazi data nkeonwe nke na -emetụtaghị mmezu ebumnuche ahụ ma ọ bụ na -adịghị mkpa.
3.1.5 Njide data dị ka ekwuru na iwu dị mkpa ma ọ bụ achọrọ maka ebumnuche nhazi.
Ndị na -akwado ihe na -ejigide data nkeonwe naanị ma ọ bụrụhaala akọwapụtara na iwu dị mkpa ma ọ bụ achọrọ maka ebumnuche haziri ya. N'okwu a; nke mbụ, ọ na -ekpebi ma ebu amụma oge maka ịchekwa data nkeonwe n'ime iwu dị mkpa, ọ bụrụ na ekpebie oge, ọ na -eme dịka oge a siri dị, ma ọ bụrụ na ekpebighị oge, ọ na -echekwa data nkeonwe maka oge achọrọ maka ebumnuche ha haziri ya. Ndị na -akwasa ozi na -ehichapụ, bibie ma ọ bụ zoo aha ya mgbe ebumnuche nke nhazi data nkeonwe kwụsịrị ma ọ bụ mgbe oge akọwapụtara n'iwu ga -agwụ.
3.2 Ọnọdụ gbasara nhazi data nkeonwe
Ọ bụrụ na ọ dịkarịa ala otu n'ime ọnọdụ nhazi data nkeonwe na Nkeji edemede 5 nke Iwu ahụ, ndị nrụpụta na -ahazi data nkeonwe gị.
3.2.1 Nkwenye doro anya nke onye nwe data nkeonwe
Otu n'ime ọnọdụ maka nhazi data nkeonwe bụ nkwenye doro anya nke onye nwe ya. Ekwesịrị ikpughe nkwenye doro anya nke onye nwe data nkeonwe n'otu isiokwu, dabere na ozi na nnwere onwe ime nhọrọ.
Iji hazie data nkeonwe dabere na nkwenye doro anya nke onye nwe data nkeonwe, a na -enweta nkwenye doro anya n'aka ndị ahịa, ndị ahịa nwere ike na ndị ọbịa nwere ụzọ dị mkpa.
3.2.2 na -ebu ụzọ hụ ọrụ nhazi data nkeonwe nke ọma n'iwu
Enwere ike ịhazi data nkeonwe nke onye nwe data dịka iwu siri dị na -enweghị nkwenye doro anya nke onye nwe data, ma ọ bụrụ na edepụtara ya n'iwu.
3.2.3 Enweghị ike inweta nkwenye doro anya nke onye ahụ n'ihi enweghị ike
Enwere ike ịhazi data nkeonwe nke onye nwe data ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa ịhazi data nkeonwe nke onye na -enweghị ike igosipụta nkwenye ya n'ihi enweghị ike ma ọ bụ nkwenye ya agaghị adị irè, iji chebe ndụ ma ọ bụ iguzosi ike n'ezi ihe nke onwe ya ma ọ bụ onye ọzọ.
3.2.4 Data nkeonwe metụtara mmechi ma ọ bụ arụmọrụ nke nkwekọrịta
Ọ bụrụhaala na ọ nwere njikọ na ntọala ma ọ bụ arụmọrụ nke nkwekọrịta, ọ ga -ekwe omume ịhazi data nkeonwe ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji hazie data nkeonwe nke ndị ọzọ na nkwekọrịta ahụ.
3.2.5 Ndị na -akwado ya na -emezu ọrụ iwu kwadoro ya
Enwere ike ịhazi data nkeonwe nke onye nwe data ma ọ bụrụ na nhazi dị mkpa maka ndị na -akwalite imezu ọrụ iwu dị ka onye njikwa data.
3.2.6 Ime data onwe onye nke isiokwu isiokwu ọha
Ọ bụrụ na onye nwe data emela ka data nkeonwe ya n'ihu ọha, enwere ike ịhazi data nkeonwe dị mkpa.
3.2.7 Nhazi data dị mkpa maka ịtọlite ​​ma ọ bụ chebe ikike
Ọ bụrụ na nhazi data dị mkpa maka nrụpụta, mmega ahụ ma ọ bụ nchedo ikike, enwere ike ịhazi data nke onye nwe data ahụ.
3.2.8 nhazi data dị mkpa maka mmasị ziri ezi nke ndị na -akwado ya
Ọ bụrụhaala na ọ naghị emerụ ikike na nnwere onwe nke onye nwe data nkeonwe, enwere ike ịhazi data nke onye nwe data ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa maka ọdịmma nke ndị na -akwado ya.
3.3 Nhazi nkeonwe nkeonwe
Ndị na -akwadebe ihe na -erube isi n'iwu ndị akọwapụtara n'iwu KVK na nhazi data nkeonwe kpebisiri ike dị ka "ogo pụrụ iche" nke Iwu KVK.
site na ndị na -akwado ya; A na -ahazi usoro pụrụ iche nke data nkeonwe n'okwu ndị a, ọ bụrụhaala na ewere usoro zuru oke nke KVK Board ga -ekpebi:
Ọ bụrụ na onye nwe data nkeonwe nwere nkwenye doro anya, ma ọ bụ
Ọ bụrụ na onye nwe data nkeonwe enweghị nkwenye doro anya;
Akụkụ pụrụ iche nke data onwe onye na -abụghị ahụike na ndụ mmekọahụ nke onye nwe data nkeonwe, n'okwu nke iwu kwuru,
Ndị mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ enyere ikike na ndị otu nọ n'okpuru ọrụ nke idebe nzuzo, maka ebumnuche nke ichebe ahụike ọha, inye ọgwụ mgbochi, nyocha ahụike, ọrụ nlekọta na nlekọta, ịhazi na ijikwa ọrụ ahụike na ego, haziri ya.
4. Nyefee nke Ozi Nkeonwe
Ndị na -akwado nwere ike nyefee data nkeonwe yana data onwe onye nwere mmetụta nke onye nwe data na ndị ọzọ nọ na mba ma ọ bụ na mba ọzọ site na iwere usoro nchekwa dị mkpa dabere na ebumnuche nhazi data nkeonwe dịka iwu siri dị. N'akụkụ a, Propars na -eme ihe kwekọrọ n'ụkpụrụ edepụtara na Nkeji edemede 8 nke Iwu KVK.
4.1 Nyefee data nkeonwe nye ndị ọzọ nọ na mba ahụ
Propars nwere ike ibufe data nkeonwe gị n'ihu ọnụnọ opekata mpe otu ọnọdụ nhazi data kwuru na Isiokwu 5 na 6 nke Iwu ahụ wee kọwaa n'okpuru Mbụ 3 nke Iwu a, ma ọ bụrụhaala na ọ na -agbaso ụkpụrụ ndị bụ isi gbasara ọnọdụ nhazi data. .
4.2 Nyefee data nkeonwe nye ndị ọzọ na mba ofesi
Ndị na -akwado nwere ike nyefee data nkeonwe yana data onwe onye nwere mmetụta nke onye nwe data nkeonwe na ndị ọzọ nọ na mba ọzọ, na ọnụnọ opekata mpe otu ọnọdụ nhazi data kọwara n'okpuru Mbụ 3 nke Iwu a yana site na ịme usoro nchekwa dị mkpa. Data nkeonwe site n'aka ndị nkwado; Nye ndị mba ọzọ kwupụtara na ha nwere nchekwa zuru oke site na Kọmitii KVK ("Mba Ofesi nwere Nchedo Zuru oke") ma ọ bụ mba ndị ọzọ ebe ndị na -ahụ maka data na Turkey na mba ọzọ dị mkpa na -eme ide iji nye nchebe zuru oke yana ebe ikike nke KVK. A na -ebufe bọọdụ ma ọ bụrụ na enweghị nchekwa zuru oke. Na nke a, ndị na -akwalite na -eme ihe dịka iwu siri dị na Nkeji edemede 9 nke Iwu KVK.
4.3 Ndị nke atọ bụ ndị a na -ebufe data nkeonwe yana ebumnuche ebugara ha
N'ikwekọ n'ụkpụrụ iwu na ọnọdụ nhazi data na edemede 8 na 9, ndị na -akwado nwere ike nyefee data na ndị otu edepụtara na tebụl dị n'okpuru:
Ndị mmadụ enwere ike nyefee Data
Onye mmekọ azụmahịa Ndị otu Propars guzobere mmekọ azụmahịa ka ha na -arụ ọrụ azụmahịa ya Ịkekọrịta oke nke data nkeonwe iji hụ na mmezu nke ebumnuche nhiwe nke mmekọ azụmaahịa
Ndị nwere oke Ndị na -eketa oke nke enyere ikike ịchepụta atụmatụ na ọrụ nyocha nke ndị na -akwado ya dabere na ndokwa nke iwu dị mkpa Ịkekọrịta data nkeonwe ejedebere na atụmatụ nke atụmatụ gbasara ọrụ azụmaahịa nke ndị na -akwalite na ebumnuche nyocha
Ndị isi ụlọ ọrụ Ndị otu ndị isi oche na ndị ọzọ enyere ikike Ịmepụta atụmatụ maka ọrụ azụmahịa Propars, na -ahụ maka njikwa kachasị elu na ịkekọrịta data nkeonwe na ebumnuche nyocha
Ụlọ ọrụ ọha na ndị na -ahazi nke iwu kwadoro Ụlọ ọrụ ọha na otu nke enyere ikike n'iwu ịnata ozi na akwụkwọ n'aka ndị na -akwado ya Nwekọrịta data nkeonwe nwere oke maka ebumnuche ịrịọ ozi site na ụlọ ọrụ na ọha dị mkpa
Ndị iwu nkeonwe nwere ikike n'iwu Iwu nkeonwe ndị iwu nyere ikike ịnata ozi na akwụkwọ n'aka ndị na -akwado ya Ikekọrịta data ejedebere na ebumnuche ndị ọrụ iwu dị mkpa chọrọ n'ime ikike iwu
5. Ikike nke Isiokwu Data na Mmega nke ikike ndị emetụtara
5.1 Ikike nke onye nwe data nkeonwe:
Ịmụta ma esichara data nkeonwe ma ọ bụ na ọ bụghị,
Ọ bụrụ na esichara data nkeonwe, na -arịọ maka ozi gbasara ya,
Ịmụta ebumnuche nke ịhazi data nkeonwe yana ma ejiri ha eme ihe dịka ebumnuche ya si dị,
Ịmara ndị ọzọ a na -enyefe data nkeonwe n'ụlọ ma ọ bụ na mba ọzọ,
Na -arịọ mgbazi nke data nkeonwe ma ọ bụrụ na nhazi ezughị ezu ma ọ bụ na -ezighi ezi yana ịrịọ ka amara maka azụmahịa emere n'ime oke a nye ndị ọzọ ebugara data nkeonwe ha,
Na -arịọ ka ehichapụ ma ọ bụ bibie data nkeonwe ma ọ bụrụ na ihe kpatara chọrọ nhazi ya ga -apụ n'anya, agbanyeghị na edoziri ya dabere na ndokwa nke Iwu KVK na iwu ndị ọzọ dị mkpa, na ịrịọ maka ngosi nke azụmahịa emere n'ime oke a. ndị nke atọ nyefere data nkeonwe,
Na -ajụ nsonaazụ a ma ọ bụrụ na nsonaazụ megide onye ahụ bilitere site na inyocha data ahaziri naanị site na sistemụ akpaghị aka,
Ị rịọ ka akwụghachi gị mmebi ma ọ bụrụ na mfu n'ihi nhazi data nkeonwe nke iwu akwadoghị.
Ọ bụrụ na enwetaghị data nkeonwe ozugbo n'aka onye nwe data; Ndị na -akwado (1) n'ime obere oge ka enwetara data nkeonwe, (2) n'oge nkwurịta okwu mbụ ma ọ bụrụ na a ga -eji data nkeonwe maka nkwukọrịta na onye nwe data, (3) n'oge, ma ọ bụrụ na data nkeonwe A na -eme ihe gbasara mkpughe nke ndị nwe data n'oge nnyefe.
5.2 Ọnọdụ ebe onye nwe data onwe ya enweghị ike ikwupụta ikike ya:
Ndị nwe data nkeonwe enweghị ike ịrịọ ikike ha edepụtara na 28 n'okwu ndị a, ebe ọ bụ na ewepụrụ okwu ndị a n'oke iwu KVK dabere na edemede 5.1 nke Iwu KVK:
Nhazi data nkeonwe site n'aka ndị mmadụ n'ime oke ọrụ metụtara onwe ha ma ọ bụ ndị ezinaụlọ ha bi n'otu ebe ahụ, ma ọ bụrụhaala na enyeghị ha ndị ọzọ yana na akwadobere ọrụ gbasara nchekwa data,
Hazie data nkeonwe maka ebumnuche dị ka nyocha, atụmatụ na ọnụ ọgụgụ site na ime ka ha ghara ịkọwa aha na ọnụ ọgụgụ gọọmentị,
Ịhazi data nkeonwe maka nka, akụkọ ihe mere eme, akwụkwọ ma ọ bụ ebumnuche sayensị ma ọ bụ n'ime oke nke ikwu okwu, ma ọ bụrụhaala na ọ mebighị nchekwa mba, nchekwa mba, nchekwa ọha, usoro ọha, nchekwa akụ na ụba, nzuzo nke ndụ onwe onye ma ọ bụ ikike onwe onye ma ọ bụ bụrụ mpụ,
Hazie data nkeonwe n'ime oke mgbochi, nchedo na ọrụ ọgụgụ isi nke ụlọ ọrụ ọha na òtù ndị iwu nyere ikike iji hụ na nchekwa obodo, nchekwa mba, nchekwa ọha, usoro ọha ma ọ bụ nchekwa akụ na ụba,
Nhazi data nkeonwe site n'aka ndị ọka ikpe ma ọ bụ ndị na -ahụ maka igbu egbu n'ihe metụtara nyocha, ikpe, ikpe ma ọ bụ usoro ogbugbu.
28.2 nke Iwu KVK. dabere na akụkọ; N'ọnọdụ ndị edepụtara n'okpuru, ndị nwe data nkeonwe enweghị ike ịrịọ ikike ha ndị ọzọ edepụtara na 5.1, belụsọ maka ikike ịchọ ka akwụghachi mmebi ahụ:
Nhazi data nkeonwe dị mkpa maka igbochi mpụ ma ọ bụ maka nyocha mpụ,
Nhazi nke data nkeonwe mere ka ọha mara site n'aka onye nwe data onwe ya,
Nhazi data nkeonwe dị mkpa maka ogbugbu ọrụ nlekọta ma ọ bụ usoro iwu yana maka ịdọ aka na ntị ma ọ bụ ịgba akwụkwọ site n'aka ụlọ ọrụ ọha na ikike na ikike yana ikike na ụdị ụlọ ọrụ ọha, dabere n'iwu nke iwu nyere,
Nhazi nke data nkeonwe dị mkpa maka ichedo ọdịmma akụ na ụba na nke steeti n'ihe gbasara mmefu ego, ụtụ isi na ego.
6. Nhichapụ, mbibi, amaghị aha data nkeonwe
Agbanyeghị na edoziri ya dabere na ndokwa nke iwu dị mkpa dị ka edepụtara na Nkeji edemede 138 nke Usoro Mpụ na Turkey na Nkeji edemede 7 nke Iwu KVK, a ga -ehichapụ ma ọ bụ bibie data nkeonwe na mkpebi Propars ma ọ bụ arịrịọ. onye nwe data nkeonwe, ma ọ bụrụ na ewepụla ihe kpatara chọrọ nhazi ma ọ bụ ahaghị ya. N'ọnọdụ a, ndị na -akwado ihe na -ewere usoro ọrụ aka na nhazi dị mkpa n'ime ụlọ ọrụ iji mezuo ọrụ metụtara ya; ewepụtala usoro ọrụ dị mkpa na nke a; na -azụ, na -ekenye ma na -eme ka amata ngalaba azụmaahịa dị mkpa iji rube isi n'ọrụ ndị a.
Na-agwa Anyị okwu
Kpọtụrụ anyị ka ibugharịa ajụjụ na nkọwa gị niile gbasara Iwu Nchedo Data Nkeonwe!
Eprel 1, 2021 | Ntughari Mba: 2021/01